Qaar ka mid ah Dhaawacyadii Qaraxii Soobe oo maanta dib loogu celiyay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Qaar ka mid ah Dhaawacyadii Qaraxii Soobe oo maanta dib loogu celiyay...
Qaar ka mid ah Dhaawacyadii Qaraxii Soobe oo maanta dib loogu celiyay Muqdisho
Muqdisho (SONNA) 13 ka mid ah dhaawacyadii bishii October loo soo qaaday Dalka Suudaan ayaa maanta dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho kuwaasooo xaaladooda Caafimaad ay soo wanaagsanaatay.
Bukaanadani ayaa ka bogsaday dhaawacyadii ka soo gaaray Qaraxii Isgoyska Zoobe ka dhacay 14-kii bishii hore, ayaa waxaa Garoonka Caalamiga ah ee Magaalada Khartuum ka sagootiyay Jaaliyadda, Ganacsato, Arday iyo madaxda Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Suudaan uu horkacayo Danjiraha Safaaradda Maxamed C/llaahi Ugaas.
Mid ka mid dadkii la socoday bukaanada oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa uga mahad celiyay sida ay Soomaalida reer Suudaan u garab istaageen mudadii ay joogeen Suudaan.
Dhanka kale Cabdifataax Maxamed Barqadle oo ka mid ah gudiga gurmadka Suudaan ayaa u mahad celiyay cid walba oo ka qeyb qaadatay gurmadka loo fadiyay Walaalahood asigana inta dhiman u rajeeyay Caafimaad.
Gabagabadii Safiirka Soomaaliya ee Dalka Suudaan Maxamed C/llaahi Ugaas ayaa asigana mahad celin aan la soo koobi Karin u jeediyay Dowladdaha Qadar iyo Suudaan kaalinta weynn ay ka qaateen gargaarka iyo gurmadka loo fidiyay dadkii ku dhaawacmay qaraxii Zoobe.
“Waxaa u mahadcelineynaa Dowladda Suudaan iyo Dowladda Qadar oo u gurmaday shacabka Soomaaliyeed, waxaan u mahadcelineyaa sido kale dhamaan Jaaliyadda iyo Ardayda reer Suudaan ee gacan ka geystay in qaar ka mid ah walaalahood ay bogsadaan”ayuu yiir Danjire Maxamed C/llaahi Ugaas.
Dowladaha Qadar iyo Suudaan ayaa si walalatinimo ah ugu soo gurmaday dadkii ku dhawaacmay qaraxii Zoobe ee 14-kii bisii hore ka dhacay Magaalada Muqdihso.
Previous articleTaliska Ciidanka Asluubta oo digniino soo saaray+Sawirro
Next articleMaamulka Gobolka Banaadir oo furaya Bangi Dhiig